TETIKASA « BRANCHEMENT MORA »: Tokantrano marefo miisa 30 000 hisitraka herinaratra hatramin’ny 2023 – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:51
Hamaha tanteraka ny olan'ny herinaratra ity tetikasa ity.
Accueil/Politika/TETIKASA « BRANCHEMENT MORA »: Tokantrano marefo miisa 30 000 hisitraka herinaratra hatramin’ny 2023
Natomboka amin'ny fomba ofisialy omaly 14 oktobra teto Antananarivo Renivohitra ny fizarana ireo karinem-pokontany "digitalisés" sy ny fampisitrahana ny tetikasa "Branchement Mora" ho an’ireo tokantrano marefo. Nidina ifotony tamina fokontany telo teto an-drenivohitra ny Filoha Andry Rajoelina nananteraka izany, dia ny Fokontanin'Ambatobe, Ankorondrano Andrefana ary Ampefiloha Ambodirano.
Sakana tsy hahafahan’ny tokantrano malagasy sasany mampiditra herinaratra ao an-tokantrano ny tsy fananana enti-manana sy vola hahafahana manao izany. Eto Madagasikara dia mbola manodidina ny 17% amin’ny vahoaka monja no misitraka herinaratra ka ho fitsinjovana ireo tokantrano marefo dia napetraka ny tetikasa “branchement mora”. Tetikasa izay sady fanatanterahana ihany koa ny Velirano faharoa nataon’ny Filoha Andry Rajoelina, dia ny hahazoan’ny tokantrano rehetra misitraka angovo sy hazavana. Marihana fa izao tetikasa fampidiran-jiro mora izao, dia vokatry ny fiaraha-miasa mahomby eo amin’ny Fitondram-panjakana Malagasy sy ny Banky Iraisam-pirenena. Araka izany ny fampidiran-jiro dia maimaim-poana tanteraka ho an’ireo tokantrano voakasiky ny tetikasa, fa ny “kits” na ny fitaovana ilaina kosa dia ho vidiana amin’ny vidiny tena mirary, hoy ny Filoha Rajoelina.
Anisan’ireo hisitraka ity tetikasa ity ireo tokantrano marefo, izay manana fidiram-bola latsaky ny 300.000Ar isam-bolana, ka miisa 30.000 ny tokantrano kendren’ ity tetikasa ity hatramin’ny taona 2023. 30.000Ar kosa no vola aloa mba hahazoana ireo “kits”, ao anatin’izany « Branchement Mora » izany, izay ahitana “Kit ready board” izay misy ireo taribian-jiro sy « prises » apetaka ao an-trano, ny « Kit branchement », izay misy ny kaontera mandeha amin’ny fahana 1,1 kW, ary voafetra ho 5A, sy ny fitaovana mampifandray izany amin’ny tambazotra mitondra herinaratra; ary ny « Kit éclairage » izay ahitana takamoa mitsitsy na ampoule LED roa. 9.500Ar isam-bolana kosa ny vidin’ny fahana isam-bolana misy 10 kWh, izay ampy tsara hahazoana hazavana.
Nosantarina tetsy amin’ny Fokontany Ambatobe kosa ny fanomezana ny karinem-pokontany vaovao, izay efa misy famantarana manokana na “QR code”. Ity karine vaovao dia hahafahana manangona sy mandrakitra ny mikasika ny tokantrano isam-pokontany. Hanamora bebe kokoa fanisàna ny mponina ny fampiasana ireo karinem-pokontany vaovao ireo, ary hanamora ihany koa ny fanomezana ireo taratasim-panjakana isan-karazany eny anivon’ireo fokontany. Fa indrindra izao fomba fiasa vaovao izao dia hahafahana mahalala ny mikasika ireo karazana fanampiana azon’ny tokantrano sitrahana avy amin’ny Fitondram-panjakana, toy ny tosika fameno, vatsy tsinjo, sosialim-bahoaka, sy ny sisa.
Izao hetsika izao ihany koa dia mifanindran-dalana amin’ny fampitaovana ara-informatika ny Fokontany 192 isa eto Antananarivo Renivohitra, izay ahitana fanomezana solosaina sy tetikasa fametrahana internet amin’ny alalan’ny HOTSPOT WIFI eny anivon’ny Fokontany rehetra, ka ny tanjona dia ny hametrahana Tanàna nomerika.
TOHANA ARA-TSOSIALY: Tsy nohadinoin’ny minisitera ireo mpanao gazety sy artista ao Mahajanga
GOVERNEMANTA NTSAY CHRISTIAN VAOVAO: Ahitana Minisitra 27, Minisitra Lefitra telo, ary Sekreteram-panjakana roa
OLAN’NY MPIANATRY NY ONIVERSITE: Ho vita afaka iray volana ny “Carte Bancaire”, Faritra maro hisitraka Oniversite vaovao
AKADEMIA MIARAMILA : Namoaka andia manokana mpanamory fiaramanidina